मदरसा शिक्षक संक्रमित भएपछि उनको सम्पर्क पछ्याउनै मुस्किल – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख २० गते १७:३८
नाकाबाट लुकिछिपी नेपाल प्रवेश, कहाँ चुक्यो सशस्त्र?
नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा उपचाररत संक्रमितको मृत्यु
नेपालगन्जमा भेटिएका एकजना कोरोना संक्रमितको यात्रा विवरण र उनको सम्पर्क पछ्याउन प्रशासन तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई हम्मे हम्मे परेको छ।
उनी नेपालगन्जको जलाहनपुरवास्थित मदरसा शिक्षक हुन्। ६० वर्षीय उनी त्यही मस्जिदको मदरसामा पढाउँदै आएका थिए। अहिले लकडाउनको बेला पनि उनले त्यहाँ ट्युशन पढाइरहेका थिए।
त्यो ट्यूशनमा टोलका धेरै केटाकेटीहरु आउने गर्थे। यत्तिमात्रै होइन करिब एक महिनाअघि उनी नेपालगन्जस्थित महेन्द्र क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा करिब ६ सय जना मानिससँगै थिए। भारतबाट आएका ती ६ सय मानिसलाई नेपालगन्ज उपमहानगरले क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो। तर, उनीहरु सबै पर्खाल र काँडेतार नाघेर क्वारेन्टाइनबाट भागेका थिए।
शुक्रबार संक्रमण पुष्टि भएका ६० वर्षीय मदरसाका ती शिक्षक पनि तिनै ६ सय मानिससँगै भागेर घर पुगेका थिए। घर पुगेपछि पनि उनले मदरासामा पढाउन भने छोडेनन्।
उनी भारतमा आफन्तसँग भेटघाट गरेर फर्किएका थिए। अहिले उनीसँग घरमा रहेका उनका परिवारका ८ जनालाई महेन्द्र क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा लगिएको छ। टोलका सबैजसो घरपरिवारलाई पनि कडा सुरक्षाका बीच क्वारेन्टाइनमै राखिएको छ।
सबैको स्वाव परीक्षण भइरहेको जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ।
स्थानीय युवाहरुले नेपालगन्ज वडा नं. ८मा पूर्णरुपमा प्रवेश निषेध गरेका छन्। प्रहरीले पनि गस्ती गरिरहेको छ। मस्जिदमा बस्नेलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि अहिले नेपालगन्ज क्षेत्रका सबैजसो मस्जिदहरुमा सुरक्षा निगरानी पनि बढाइएको छ। यद्यपि यसअघि नै नेपालगन्जका मस्जिद, मदरासा तथा मन्दिरलगायतका धार्मिकस्थलहरुमा बस्ने धार्मिक गुरुलगायत सबैको परीक्षण सुरु भइसकेको थियो।
‘अहिले टोल पूरै सुनसान भएको छ। सबैलाई त्रास छ, बाटोभरि पुलिस छन्’ स्थानीय समसुद्दिन सिद्दिकी भन्छन् ‘टोल पूरै सिल भएको छ। कोही बाहिर पनि जान पाउँदैन, कोही यहाँ आउन पनि पाउँदैन।’
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्काले संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरुको खोजी र पहिचान भइरहेको बताएका छन्।
२४ बर्षीय युवाको दोस्रो पटकको रिपोर्ट निगेटि
६० वर्षीय ती संक्रमितसँगै अर्का एकजनाको पिपिआर रिपोर्ट पनि नेपालगन्जमा पोजेटिभ देखाएको थियो। तर, दुबैको स्वाव पुनः परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाउँदा ६० वर्षीय वृद्धको नतिजा पोजेटिभ आयो भने अर्का युवाको नेगेटिभ।
नेपालगन्जमा पोजेटिभ भएको रिपोर्ट काठमाडौंमा नेगेटिभ भएपछि उनको स्वाव फेरि परीक्षण गरिएको थियो। तर, दोस्रोपटक पनि रिपोर्ट नेगेटिभ नै आएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँके का फोकल पर्सन नरेशबाबु श्रेष्ठले बताए।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका उनी धम्बोजीस्थित मस्जिदमा बस्दै आएका युवा हुन्। मस्जिदका धर्मगुरुलाई पनि अहिले निगरानीमा राखिएको छ भने उनको सम्पर्कमा आएकाहरुको खोजी भइरहेको छ।